दैनिक अनलाइन, Author at Dainik Online - Page3of 1540 Dainik Online
काठमाडौं । अमेरिकाको मिनियापोलिस सहरमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बेला घाँटी थिचेर मारिएका जर्ज फ्लोयडमा कोरोना भाइरस संक्रमण पोजेटिभ पाइएको छ। अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिक फ्लोयडको हत्या भएपछि अहिले अमेरिकाभर प्रदर्शन चर्किएको छ। फ्लोइडको
वासिङ्टन । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकी समाजभित्रको गहिरो जातीय र सामाजिक–आर्थिक असमानता उजागर भएसँगै उत्पन्न ऐतिहासिक संकटका बीच आफ्नो सार्वजनिक जीवनलाई पुनः सक्रिय तुल्याउनु भएको छ । आगामी
काठमाडौं । भारतीय सरकारले लकडाउनका कारण नेपालमा रोकिएका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता लगेको छ। विभिन्न काम विशेषले काठमाडौं उपत्यकामा आइ रोकिएका भारतीय नागरिकलाई भारतीय राजदूतावासको पहलमा स्वदेश फिर्ता लगिएको छ।
शंकर पोखरेलकाे व्यापारीहरुलाई प्रश्नः आफूखुसी पसल खोल्दा कोरोना फैलिए कसले जिम्मा लिन्छ ?
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले व्यापरीले आफूखुसी पसल खोल्ने निर्णयको विरोध गर्नुभएकाे छ । व्यापारीहरुले आफूखुसी पसल खोल्दा समुदायस्तरमा कोरोना फैलिए कसले जिम्मा लिन्छ ? भन्दै
बागलुङ । २ जना संक्रमित निको भएर घर फर्के पछि जिल्लामा अवस्था सामान्य नै थियो। विस्तारै छिमेकी मुलुक भारत बाट अहिले दिनहुँ सयौंको संख्यामा जिल्ला भित्रिने क्रम बढ्दो छ। देशभर
काडमाडौं । काठमाडौंको न्यूरोडमा रहेका अधिकांस पसहलरु आज देखि खुलेका छन्। सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि जारी गरेको लकडाउन लम्बिदै गएपछि पसल व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले बिहीबार देखि पसल खोल्न
व्यवसायीले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने चेतावनी दिएपछि उपत्यकाका तीनै प्रशासनको आकस्मिक बैठक
काठमाडौँ । उद्योगी-व्यवसायीहरुले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने चेतावनी दिएपछि उपत्यकाभित्रका तिनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त रुपमा आकस्मिक बैठक बसेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीलगायतको
प्युठान । प्युठान नगरपालिका–१ खैराका माधव आचार्य बुटवल पावर कम्पनीको बाँझो जग्गामा रोपाइँ गर्दै हुनुहुन्छ । बन्दाबन्दीले अन्नलगायत खाद्य उपजमा भएको महँगी सम्झिएर उहाँ चार रोपनी बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन
कास्की । गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, स्याङ्जा, पर्वत र म्याग्दीमा थप १६ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले आज बिहान थप सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो
निजी क्षेत्रले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको आयात गरेसँगै तातोपानी भन्सार कार्यालयको राजश्व सङ्कलनमा सकरात्मक प्रभाव देखिएको छ। सो कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीका अनुसार गत सोमबारसम्ममा